Mihinana amin’ny hazon’aina
“Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana. Izay maharesy dia havelako hihinana ny avy amin’ny hazon’aina, izay eo amin’ny Paradisan’Andriamanitra” Apôk. 2:7
Mahakasika ny fiangonana rehetra io hafatra io. Tsy misy fomba tsara indrindra ampiasana ny fitaovam-pandrenesana mihoatra ny fihainoana ny feon’Andriamanitra miresaka aminao amin’ny alalan’ny Teniny. Teny fikasana maro sesehena ary manana amby ampy no omena ireo izay maharesy. Tsy ampy ny mirotsaka an’ady, tsy maintsy manohy izany hatramin’ny farany isika. Tsy tokony hanaiky ho resy mihitsy isika. Ampanantenaina izay maharesy ny fandresena miezinezina. “Izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin’ny hazon’aina, izay eo amin’ny Paradisan’Andriamanitra”. Izay very rehetra tamin’ny fahalavoan’i Adama dia nohavaozina, eny, mihoatra noho izany aza, ao amin’ny fanavotana. “Ary hoy Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana: Indro havaoziko ny zavatra rehetra” Apôk. 21:5
Andeha handinika sy hitsikera ny momba antsika isika. Tsy voadika ve ireo fanekena nataontsika tamin’ny fotoana nanaovana batisa antsika? Maty ao amin’izao tontolo izao ary velona ao amin’i Kristy ve isika? Mikatsaka ny zavatra any ambony, any amin’ny fitoeran’i Kristy eo an-tànana ankavanan’Andriamanitra? Tapaka ve ny fatorana mampifandray sy mampiorina antsika amin’Ilay vatolampy mandrakizay? Manaraka ny rian-drano mitondra any amin’ny fahaverezana ve isika? Tsy hiezaka ve isika hanao izay tratra hanohitra ny herin’izany? Andeha tsy hisalasala intsony fa hampiasa amim-kafanam-po ny fivoy; andeha hatao izay tokony hatao mba tsy haharendrika ny lakana.
Anjarantsika ny mamantatra ny kilema sy ny otantsika, izay mahatonga haizina sy fahalemena ara-panahy, ka mamono ilay fitiavana voalohany. Mety ho fitiavana ny zavatra eto amin’izao tontolo izao ve izany? Fitiavan-tena, fitiavana ny maha-izaho ve? Ny fiezahana ho lohalaharana? Fahotana amin’ny fanaram-batana izay mahery vaika? Fahotana toy ny an’ny Nikôlaitanina, izay namadika ny fahasoavan’Andriamanitra ho fahavetavetana? Fampiasana tsy ara-drariny ny fahazavana lehibe dia ny baiboly sy ireo tambontsoa, amin’ny fireherehana ho mitady fahendrena sy fahalalana ara-pivavahana , nefa ny fiainana sy ny toetra tsy voahevitra no sady mamohehatra? Na inona na inona nokolokoloina sy nambolena mandra-pahatonga azy ho mahery ka hifehy anao, manaova ezaka tsy amim-pihambahambana handresy izany, raha tsy izany dia ho very ianao.